galmudugnews.com » Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in gar gaar deg deg gaarsiineyso dadkii fatahaadii B/weyn ku barakacay
Home » WARARKA » Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in gar gaar deg deg gaarsiineyso dadkii fatahaadii B/weyn ku barakacay Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in gar gaar deg deg gaarsiineyso dadkii fatahaadii B/weyn ku barakacay galmudug on
No Comment Views 16217
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21009 hitsContact US - 19638 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15724 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 14960 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13912 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13863 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13812 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13191 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11768 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11730 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11705 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11515 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11503 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11342 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11167 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11109 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11051 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11032 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10695 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10336 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10198 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10101 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10007 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9896 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9771 hits Home About